Ukuya kwagoqanyawo – iAfrika
Kuningi esikufundayo ngomlando wakithi okuhinta izinto eziningi ezahlukahlukene okubalwa kuzo amasiko, usikompilo, imikhokha nokunye njalonjalo ngoba sinomthamo wezinto thina sizwesika Phunga noMageba. Sekuyinsakavukela ukuzwa abantu uma bekhuluma ngesifo esehlele umuzi othile noma ukuba khona kwethunzi elimnyama esibongweni thizeni kube khona oya kwelamathongo uzwe bethi “usesishiyile ulibhekise kwagoqanyawo”. Alikho iphutha ngenkulumo enjalo kodwa ke akusiyona inkulumo okumele ibhekiswe kunoma ubani osuke eshonile, le nkulumo inomnikazi wayo okusuke kumele ibhekiswe kuyo njengakho nje ukungaphili kwenkosi okuyaye kuthiwa iyadunguzela nakho ukudlula kwayo okunegama lakho nalo okubizwa ngalo uma ingasekho.
Ngokwesintu kuyaziwa ukuthi inkosi ayishoni kepha iyakhothama kanti ke nalo leli gama elithi umuntu useye kwagoqanyawo lisuke libhekiswe kumnumnzane wekhaya. Leli gama lisetshenziswa uma kudlule umnumnzane wekhaya ubethi uma esefihlwa agoqwe izinyawo zakhe. Indlela yokwenza lokhu bekuwukuthi athotshwe ngamanzi ashisayo kakhulu ukuze ezothamba bese elaliswa ngomhlane ukuze kwenzile lokhu. Ubethotshwa ngamanzi uma esethambile bese eqoshanyiswa eseqgikini sakhe khona ezoqinela kuso isigqiki khona ezofihlwa ehleli kanjalo. Le yokuthi kukhona oyiswa kagoqanyawo isukela lapho ukuthi umnumnzane usuke efihlwe egoqwe izinyawo ngankathi ebekwa endaweni yakhe yokugcina, ingakho ke kungasiyena wonke umuntu okuthi uma edlule emhlabeni bese kuthiwa uye kwagoqanyawo.